अन्धविश्वास र धर्मका नाममा जीवित परम्पराहरु | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
अन्धविश्वास र धर्मका नाममा जीवित परम्पराहरु
– थानेश्वर प्रसाद भट्ट । विषय प्रवेश पूर्व नै स्पष्ट गरिन्छ कि म एक कट्टर हिन्दुवादी र सांस्कृतिक मान्यतापालक परिवारबाट हुर्केको व्यक्ति हुँ । हिन्दुत्वप्रति हृदय देखि नै सम्मान छ तर कतिपय अपाच्य विषयहरुलाई धर्मसँग महान हिन्दुत्वलाई नै प्रहार गर्ने प्रकृतिका छन् भन्ने लागेकोले मौन रहन सकेन ।
स्वस्थानी माताको व्रत सकियो । एक महिनासम्म निराहार रहेर महिलाहरुले यसको निष्टापूर्वक पालन गरेको भन्ने गरिन्छ । यस भौतिक जगतमा भौतिक सुखहरुकै प्राप्तिका लागि यस्ता गतिविधि चलिरहेका हुन्छन् । अन्तर पारलौकिक जगतसँग अध्यात्मवादी चिन्तन गहिरोसँग जोडिएको छ तर व्रत यज्ञादि जुन परम्परा निर्वाह गरिन्छन् यिनको पारलौकिक अन्तश्चेतनासँग सम्बन्ध रहेको पाइदैन । एक कट्टर ब्राह्मण परिवारमा हुर्केको हुनाले ब्रह्मस्वरुपमा स्थित मानव नै वास्तविक हुन्छ । त्यसभित्र रैदान, चमार, सन्त कवीर, जेसस क्राइष्ट हाम्रा देवी देवता सबै पर्दछन् । तामसीवृत्तिले व्याप्त प्राणी जातिले ब्राह्मण भनिएपनि ब्रह्मत्व प्रति क्रुर मजाक हो ।
धार्मिक आवरणमा अन्तरनिहित परम्पराहरुको पुनरावलोकन अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ । अग्रगामी नायकहरुले यसलाई कठोरतापूर्वक प्रारम्भ गर्नै पर्दछ तर कुनै पनि परम्परा कथित आस्थाका आयामहरुलाई बलपूर्वक एकै चोटी समाप्त गर्ने प्रयास भएमा विष्फोटक स्थिति पनि निर्मित हुन सक्तछ । उदाहरणका लागि छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान सफल हुन सकिरहेको छैन । यसमा कतिपय अभियान जडमा नभई सतहमा छन् । महिला विरुद्ध क्रुर अमानवीय व्यवहार त छाउपडी गोठ पर्याय हो नै ।
यसमा कुनै तर्कको ठाउँ रहदैन तर रजस्वला भएका बखत केही पनि गर्न पर्दैन भन्ने होइन । मलमुत्र विसर्जन, जैविक क्रिया र आवश्यकता हो तर जथाभावी जुनसुकै स्थानमा विसर्जन गर्न त मिल्दैन र जलशुद्धि नगरेपनि हुन्छ भन्नु वैज्ञानिक मान्यता विरुद्ध होला नै । मलाई छाउपडी सम्बन्धमा धेरैले धारणा बुझ्न खोज्दछन् । त्यसैले पनि सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गर्न आवश्यक लाग्यो । छाउपडी गोठका नाममा अमानवीय परिपाटी अपराध हो । घरभित्रै रजस्वलालाई अलग बस्न दिनु पर्दछ । स्वभाविक रुपमा रक्तश्राव हुदाँ सफाईको आवश्यकता रहन्छ नै । ३ दिन बढि नै हुने हुदा स्वच्छाका लागि पनि कतिपय नियम मान्नै पर्ने हुन्छ । धार्मिक स्थलहरुमा पनि पवित्रताका लागि यो आवश्यक छ तर यसैका नाममा प्रताडित गर्ने यातना पुग्ने अनावश्यक दुःख पुग्ने काम गरिनु हुन्न ।
भौतिक युगमा प्रत्यक्ष परिणामका अपेक्षा स्वभाविक हुन् । सप्ताह पुराणका नाममा रिखीहरुलाई द्रव्य दिएर पाठ पढाउनु निरर्थक हो । यसबाट के उपलब्धि भयो त्यो जान्न पाउनु पर्दछ । एक महिना लामो स्वस्थानी व्रत कथामा आराध्य मानिएका शिवजीलाई व्यभिचारी यौन पिपासुका रुपमा चित्रित गरी ७० वर्षका वृद्ध ब्राह्मण भनी ७ वर्षकी गोमासँग विवाह, त्यस्तै अर्का आराध्य विष्णुलाई जालान्धर पत्नी सति वृन्दाको बलात्कार घटना लगायतका कथा हिन्दुत्वको महान संस्कृतिको उपहास हो, जसले पनि त्यस्ता कथा बनाए ती अध्यात्म वेदान्त दर्शनका दुश्मन हुन् भन्ने दृढ मान्यता राख्दछु ।
अन्तश्चेतनाको प्रसंग आउँदा हाम्रा समाजमा लाग्ने योग शिविरहरु मानवताको उपकार गर्ने प्रकृतिका छन्, गरी हेरेमा तुरुन्त परिणाम अनुभव गर्न सकिन्छ । आजका यी रिखी पण्णा पुजारी धामीहरुका व्यापार फष्टाएको देखिन्छ । महान धर्म कर्म माथि यिनकै कारण कलंकित हुने वातावरण बन्ने गर्दछ । ईसाइ पादरीहरुका बाल यौन दुराचार, हिन्दु मठाधीशहरुका काला कर्तुत आम भइसकेका छन् । इस्लाममा महिलाहरुलाई मानव नै नसम्झने, भोग्य वस्तु, जति विवाह गरेपनि पुरुषलाई छुट, यौनाचारप्रति पुरुष दण्डित हुने नगण्य संभावना लगायत कथित धर्माडम्बर भित्रका अन्धविश्वासले मानव जीवन तहसनहस पारी रहेको छ ।
सामाजिक पुनर्जागरण गर्नु छ भने यसका लागि ऐन कानून बनाएर मात्र रुपान्तरण हुन सक्तैन । भारत जस्तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा अझै पनि दलितप्रति अपमानजनक व्यवहार साम्य हुन सकेको छैन । नेपालमा पनि छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध घोषित गरिएको छ तर डोम चमार लगायत दलितप्रति मधेशमा तथा समग्र देशमा भेदभाव कायम छ । निहित स्वार्थका लागि विवाद उठाइए पनि यसबाट समाज रुपान्तरण हुन सक्तैन । वेद उपनिषद् पुराण आदिमा रहेका गुढ अमृतरुपी कर्म लोप राखी धूर्तहरुले आफ्नो फाइदाका लागि बनाइएका धार्मिक आवरणका यस्ता क्रियाकलाप निषेध गरिनुपर्दछ तर दुर्भाग्य त यो छ कि राज्य आफै यसमा सहभागी भएको पाइन्छ । भोटो देखाउने जात्रा दशैं टीका लगायतमा अरन्को झलक देखिन्छ । काठमाण्डौं भित्र त यस्ता अनगिन्ति जात्रा दिनहुँजसो भइ रहन्छन् । यस्ता कथित धार्मिक आवरणका परम्पराले मानवताको हित गर्न सक्तैन ।
← नेपालले किन कमजोर महसुस गर्छ ?
नेताहरुको दोहोरो नीति ! →